कोरोना भाइरसको त्रास : ग्यास गायब कि अभाव? – Globalpatrika
मुख्य पृष्ठमुख्य खबरकोरोना भाइरसको त्रास : ग्यास गायब कि अभाव?
कोरोना भाइरसको त्रास : ग्यास गायब कि अभाव?
आइतबार, २५ फागुन, २०७६
काठमाडौं – उपभोक्ताले चाहिनेभन्दा बढी खाना पकाउने ग्यास सञ्चित गर्न थालेपछि बजारमा प्रत्यक्ष असर परेको छ। कोरोना भाइरसको त्रासका कारण एकै व्यक्तिले अत्यधिक संख्यामा सिलिन्डर सञ्चित गरेपछि निम्नवर्ग, मजदुर र विद्यार्थी मर्कामा परेका छन्।
‘निम्नवर्ग ग्यास नपाएर सास्ती व्यहोर्न बाध्य छन्। ग्यास पर्याप्त मात्रामा छ। नियमित रूपमा बढी परिमाणमा आयात भइरहेकाले थुपार्न आवश्यक छैन,’ पौडेलले भने, ‘चाहिएको अवस्थामा जति पनि उपलब्ध गराउन सक्षम छौं।’ पौडेलका अनुसार निगमले मार्चमा ४५ हजार टन हाराहारीमा ग्यास आयात गर्न ग्यास बोटलिङ तथा रिफिलिङ उद्योगलाई उत्पादन प्रडक्ट डेलिभरी अर्डर (पीडीओ) जारी गरेको छ।
निगमको ग्यास विभागका निर्देशक दीपक बरालका अनुसार निगमले हालसम्मकै सबैभन्दा बढी पीडीओ (४५ हजार टन) मार्चमा जारी गरेको छ। ‘यसले नपुगे हामी थप ५ टनको पीडीओ जारी गर्न तयार छौं,’ बरालले भने, ‘यो माग अस्वाभाभिक रूपमा आएको छ। यति परिमाण कहिले खपत हुँदैनथ्यो। अत्यधिक खपत भए पनि ४० टनले पुग्थ्यो।’
अत्यधिक मागका कारण महिनाभरमा आयात हुने ४५ हजार टनमध्ये सात दिनमै १०५ प्रतिशतका दरले १३ हजार टन आयात भइसकेको छ। जब कि दैनिक खपत १ हजार पाँचका दरले सात दिनमा १० हजार ५ सय टन आयात हुनुपर्ने थियो।
निगमको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी ग्यास खपत हुने समय जनवरी र केही कम फेबु्रअरीमा हो। सन् २०१८ को फेब्रुअरीमा २६ हजार १ सय ७४ टन ग्यास खपत भएको थियो। २०१९ फेबु्रअरीमा ३५ हजार ७ सय ५१ टन आयात भएको थियो। तर पछिल्लो समयमा विद्युतीय ऊर्जा नियमित आपूर्तिले गर्दा जाडो हुने समय जनवरी र फेब्रुअरीमा ग्यास खपत घटाएको छ।
गत जनवरीमा ३९ हजार १ सय २७ टन मात्रै ग्यास खपत भएको थियो। अघिल्लो जनवरीमा ४० हजार ४ सय ५७ टन खपत भएको थियो।
‘फेब्रुअरी अन्तिम सातादेखि ग्यासको माग ह्वात्तै बढेको छ,’ बरालले भने, ‘जुन पिक आवरमा अत्यधिक ग्यासको खपत बढ्नुपर्ने थियो। अहिले सर्वसाधारणले चाहिनेभन्दा बढी परिमाणमा सिलिन्डर भरेका कारण ग्यासको खपत बढेको हो।’
एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष गोकुल भण्डारीले ग्यास सञ्चितले बजारमा प्रत्यक्ष असर पारेको जानकारी दिए। उनले सर्वसाधारणलाई बढी सिलिन्डर सञ्चित नगर्न आग्रह गरे। देशभरको कुल माग र खपतको ५० प्रतिशतका आधारमा सामान्य समयमा उपत्यकामा दैनिक ५० हजार थान सिलिन्डर खपत भइरहेको थियो। देशभर एक लाख सिलिन्डर खपत हुन्थ्यो। पछिल्लो समयमा उपत्यकामा दैनिक ७ हजार थान सिलिन्डर थप माग भएको छ।
नेपाल ग्यास उद्योगका प्रमुख भण्डारीले अभाव पूर्ति गर्न मार्चमा कम्तीमा ४८ हजार टन ग्यास आवश्यक पर्ने बताए।
‘उपत्यकावासीले अत्यधिक संख्यामा सिलिन्डर जम्मा गरे। हाम्रो काम उत्पादन गरेर बजारमा पठाउने हो। बजारमा जति पठाए पनि विक्रेताकहाँ लाइन कम हुनुको साटो बढ्दै गएको छ’, भण्डारीले भने, ‘हामी उपभोक्ताको माग पूरा गर्न तयार छौं। तर चाहिएजत्ति मात्र लिन आउनुप¥यो।’
संघले सम्पूर्ण सदस्य उद्योगीमार्फत एकजनालाई एक थान सिलिन्डर मात्रै उपलब्ध गराउन शुक्रबार निर्देशन दिएको छ। संघको निर्देशन तल्लो विक्रेतासम्मले नमान्ने अवस्था छ।
उपत्यकाको बजारमा २७ वटा उद्योगका सिलिन्डर प्रयोग हुन्छन्। यसमा २० प्रतिशत हिस्सा नेपाल ग्यास कम्पनीको छ। नेपालमा ५८ वटा ग्यास उद्योगले खाना पकाउने ग्यास बजारीकरण गर्दै आएका छन्।